महिला लघुवित्तको आईपीओ हेर्न मिल्ने ३ वटै सर्भरमा समस्या
५१ सेकेन्ड अघि लोकान्तर
महिला लघुवित्त वित्तीय संस्थाको आईपीओ हेर्न नपाउँदा लगानीकर्ता हैरानीमा परेका छन् । नतिजा हेर्न मिल्ने तीन वेबसाइटमध्ये दुई साइट खुल्दै नखुलेपछि सर्वसाधारणले नतिजा हेर्न नपाएका हुन्। तीन ठाउँबाट मात्रै प्राथमिक शेयरको नतिजा हेर्ने व्यवस्था गरेपछि लगानीकर्ताहरूले यस्तो समस्या भोग्नुपरेको हो...
खर्बपति मुकेश अम्बानीको घर अगाडि विस्फोटक पदार्थ
भारतका खर्बपति मुकेश अम्बानीको निवास एन्टिलिया बाहिर बिहीबार एउटा कारमा विस्फोटक पदार्थ भेटिएको छ। रिलायन्स इन्डस्ट्रिजका प्रमुख मुकेश अम्बानीमाथि आक्रमणको निशाना बनाउन खोजिएपछि सुरक्षा बढाइएको छ। पुलिस जाँचमा पाइए अनुसार मुकेश अम्बानीको घरमा एक महिनासम्म रेकी गर्नेहरुले विस्फोटक पदार्थ राखेको...
५ मिनेट अघि अनलाईन खबर
१४ फागुन , काठमाडौं । सुनको भाउ तोलामा पाँच सय रुपैयाँले घटेको छ । बिहीबार ८९ हजार ३ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको सुनको शुक्रबारकालागि ८८ हजार ८ सय रुपैयाँ तोकिएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । आजका लागि...
१४ फागुन, काठमाडौं । स्याङजाको पुतलीबजारबाट भरुवा बन्दुकसहित एकजना पक्राउ परेका छन् । पुतलीबजार नगरपालिका–२ का ६९ वर्षीय डिलबहादुर गुरुङलाई एउटा एकनाले भरुवा बन्दुकसहित शुक्रबार बिहान प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । उनको घरमा एकनाले भरुवा बन्दुक अवैध रुपमा लुकाइ राखेको...
परीक्षा उत्तीर्ण भएको महिना दिनमा चालक अनुमतिपत्र पाइने!
नयाँ चालक अनुमतिपत्रका लागि फाराम भर्नेको सङ्ख्या पाँच लाखभन्दा बढी हुँदा यातायात व्यवस्था विभागले अनुमतिपत्रको परीक्षा पास गरेका सेवाग्राहीलाई एक महिनाभित्रमा अनुमतिपत्र दिइसक्ने योजना बनाएको छ। ठूलो सङ्ख्यामा कार्ड छाप्ने उपकरण (मास प्रिन्टर) को प्रयोग गरेर एकैदिनमा धेरै सङ्ख्यामा अनुमतिपत्र...
अझै पनि भन्छौ समस्या छोटो भोटोमा छ तिम्ले गिद्दे आँखा गाड्ने स्तन र पिडुलामा छ! अझै पनि भन्छौ, समय गलत थियो गल्ती तरुनीले एक्लै बेटाइममा हिँड्नुमा छ! अझै पनि भन्छौ बाहिर हिंसकको भिड छ, भित्रै बस तिमी लुटिनु, च्यातिनु, धकलिनु,...
पर्वत । यही फागुन १५ देखि २५ गतेसम्म आयोजना हुने दोस्रो राष्ट्रिय मगर महोत्सवको तयारी पूरा भएको छ । मगर सङ्ग्रहालय बनाउन पुन युवा क्लबले ३९ औँ मगर दिवसका अवसरमा अगामी शनिबारदेखि सो महोत्सव आयोजना गर्न लागेको हो । प्रदर्शनी...
सञ्चार माध्यमलाई नदिएपछि आइपिओको नतिजा हेर्न पाएनन् लगानीकर्ता
सञ्चार माध्यमलाई प्राथमिक सेयर (आइपिओ)को नतिजा प्रकाशन गर्न राेक लगाएपछि लगानीकर्ता समस्यामा परेका छन्। आइपिओ बाँडफाँड भएको लामो समयसम्म पनि नतिजा हेर्न नपाएको लगानीकर्ताले गुनासो गरेका छन्। सिडिएस एण्ड क्लियरिङले आइपिओको नतिजा सम्वन्धित कम्पनीको वेबसाइट, बिक्री प्रवन्धकको वेबसाइट र सिडिएससीको...
घरबाटै माटो परीक्षण : कृषि उत्पादन बढ्ने आशा
काठमाण्डाै – गएको बुधवार सरकारले माटोको डिजिटल नक्सा सार्वजनिक गरेको छ । सार्वजनिक भएको डिजिटल नक्सा माटोको तत्कालको अवस्थाबारे जानकारी लिने एउटा माध्यम हो । नेपालभरिको जुनसुकै ठाउँको माटोको तत्कालको अवस्थाबारेको जानकारी डिजिटल नक्साबाट लिन सकिन्छ । देशका विभिन्न ठाउँका २३ हजार...
खोला उत्खननमा गाउँपालिका अध्यक्षलाई गाडीकै प्रस्ताव !
१४ फागुन, पोखरा । कास्कीको रुपमा गाउँपालिकाको वडा नम्बर १, २ र ७ लाई छोएर मादी नदी बगिरहेको छ । पारिपट्टी लमजुङको मध्य नेपाल नगरपालिका पर्छ । रुपाको अधिकार क्षेत्रबाट मादी नदी उत्खनन गरी नदीजन्य पदार्थ लमजुङतिर अवैध ओसार पसार...
बारापाक सुलिकोट गाउँपालिकाले आज सार्वजनिक बिदा दिएको छ । दशवर्षे जनयुद्धका क्रममा राज्यपक्षबाट मारिएका प्रथम शहीद दिलबहादुर रम्तेलको स्मृति दिवसका अवसर पारेर सार्वजनिक बिदा दिएको गाउँपालिका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भट्टले जानकारी दिए । “जनयुद्धका प्रथम शहीद रम्तेलको स्मृति दिवसका अवसर पारेर...
हलिउड नायिका तथा चर्चित गायिका लेडी गागाको घर बाहिर हमला भएको छ । लस एन्जलसमा लेडी गागाको कुकुर घुमाउने व्यक्ति रायन फिशरमाथि एक व्यक्तिले गोली हानी लेडी गागाका दुई फ्रेन्च बुलडग्स चोरी गरेका छन् । रायनलाई यो हमलापछि अस्पताल लगिएको...
यही फागुन १५ देखि २५ गतेसम्म आयोजना हुने दोस्रो राष्ट्रिय मगर महोत्सवको तयारी पूरा भएको छ । मगर सङ्ग्रहालय बनाउन पुन युवा क्लबले ३९ औँ मगर दिवसका अवसरमा अगामी शनिवारदेखि सो महोत्सव आयोजना गर्न लागेको हो । प्रदर्शनी कक्ष ,...
काठमाडौंको तारकेश्वरमा फेरि बर्डफ्लु रोग देखिएको छ। पशु सेवा विभागले तारकेश्वर नगरपालिका-१ मा व्यवसायिकरूपमा पालिएका कुखुराको नमूनाको केन्द्रीय पशुपक्षी रोग अन्वेषण प्रयोगशालामा गरिएको पिसिआर परीक्षणमा बर्डफ्लु रोग पुष्टि भएको विभागकी महानिर्देशक डा दमयन्ती श्रेष्ठले जानकारी दिइन्। यसअघि पनि त्यहाँ बर्डफ्लु...
इरान समर्थित समूहमाथि अमेरिकाको हवाई आक्रमण
१४ फागुन, काठमाडौं । अमेरिकी सेनाले पूर्वी सिरियामा बिहीबार इरान समर्थित संगठनमाथि हवाई आक्रमण गरेको छ । केही समयअघि इराकमा अमेरिकी सेना रहेको स्थानलाई लक्षित गर्दै भएको आक्रमणको विषयलाई लिएर अमेरिकी सेनाले बिहीबार उक्त आक्रमण गरेको हो । अमेरिकाको रक्षामन्त्रालयलका...
काठमाडौं : मन्जुश्री फाइनान्सले डिजिटल क्युआर कोड भुक्तानी सेवा सुरु गरेको छ। आफ्ना बैंकिङ सेवाहरूलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले फाइनान्सले फागुन १३ गतेबाट क्युआर कोड भुक्तानीको सेवा सुचारु गरेको हो। यो सेवा सुरु भएपछि अबदेखि ग्राहकहरूले आफ्नो मोबाइल बैकिङ एपबाट क्युआर...
काठमाडौं । काठमाडौँको तारकेश्वरमा फेरि बर्डफ्लु रोग देखिएको छ । पशु सेवा विभागले तारकेश्वर नगरपालिका–१ मा व्यावसायिक रुपमा पालिएका कुखुराको नमुनाको केन्द्रीय पशुपक्षी रोग अन्वेषण प्रयोगशालामा गरेको पिसिआर परीक्षणमा बर्डफ्लु रोग पुष्टि भएको विभागका महानिर्देशक डा दयमन्ती श्रेष्ठले जानकारी दिइन्...
ब्राजिलमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या साढे दुई लाख नाघ्यो
१४ फागुन, काठमाडौं । ब्राजिलमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) बाट मृत्यु हुनेको संख्या दुई लाख ५० हजार नाघेको छ । ब्राजिलको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार अहिले मुलुकमा राष्ट्रव्यापी कोरोना खोप कार्यक्रम चलिरहेको भए पनि संक्रमण भने निरन्तर बढिरहेको छ । ब्राजिलका राष्ट्रपति...
३७ हजार ५ सयले पाए महिला लघुवित्तको आईपीओ, नतिजा हेर्न भने समस्या
१४ फागुन, काठमाडौं । महिला लघुवित्त वित्तीय संस्थाको प्राथमिक सेयर (आईपीओ) ३७ हजार ५ सय लगानीकर्ताले हात पारेका छन् । शुक्रबार बिहान भएको बाँडफाँटमा गोलाप्रथाबाट ३७ हजार ५ सय जनालाई १० कित्ताका दरले आईपीओ परेको हो । कम्पनीको शेयर १५३...
साँझ मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै, संसद बोलाउने तयारी
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद्को बैठक बोलाएका छन् । सर्वोच्च अदालतले संसद पुनःस्थापना गरिदिएपछि मन्त्रिपरिषद्को बैठक पहिलो पटक बस्न लागेको हो । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा आज साँझ ५ बजेका लागि बैठक डाकिएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले जानकारी दिए...
काठमाडौं । नयाँ चालक अनुमतिपत्रका लागि फाराम भर्नेको सङ्ख्या पाँच लाखभन्दा बढी हुँदा यातायात व्यवस्था विभागले अनुमतिपत्रको परीक्षा पास गरेका सेवाग्राहीलाई एक महिनाभित्रमा अनुमतिपत्र दिइसक्ने योजना बनाएको छ । ठूलो सङ्ख्यामा कार्ड छाप्ने उपकरण (मास प्रिन्टर) को प्रयोग गरेर एकैदिनमा...
युट्युबमा नयाँ फिचर, आफ्ना बच्चाबच्चीको निगरानी गर्न सकिने
काठमाडौं । आफ्ना बच्चाबच्चीले युट्युबमा के के सामाग्रीहरु हेर्छन् भन्ने कुरा अभिभावकले नियन्त्रण तथा निगरानी गर्न सक्ने गरी युट्युबमा एक नयाँ फिचर ल्याउँदैछ । युट्युब किड्स एप प्रयोग गर्न नचाहने र युट्युबको मुख्य एपकै प्रयोग गर्ने किशोरावस्थाका बच्चाबच्चीहरुलाई लक्षित गर्दै...
तारकेश्वरमा बर्ड फ्लु : १५ हजार कुखुरा नष्ट
१४, फागुन, काठमाडौं । काठमाडौंको तारकेश्वरमा देखा परेको बर्ड फ्लुका कारण झण्डै साढे १५ हजार कुखुरा नष्ट गरिएको पशु सेवा विभागले जनाएको छ । बिहीबार पुष्टि भएको बर्ड फ्लु नियन्त्रण गर्न संक्रमण देखा परेको क्षेत्र वरपरका लेयर्स, बोइलर र लोकल...
नयाँ चालक अनुमतिपत्रका लागि फाराम भर्नेको सङ्ख्या पाँच लाखभन्दा बढी हुँदा यातायात व्यवस्था विभागले अनुमतिपत्रको परीक्षा पास गरेका सेवाग्राहीलाई एक महिनाभित्रमा अनुमतिपत्र दिइसक्ने योजना बनाएको छ । ठूलो सङ्ख्यामा कार्ड छाप्ने उपकरण (मास प्रिन्टर) को प्रयोग गरेर एकैदिनमा धेरै सङ्ख्यामा...